Putiin marsaa 4ffaa pirezedaantii Raashiyaa ta'uun kakuu raawwatan - BBC News Afaan Oromoo
Putiin marsaa 4ffaa pirezedaantii Raashiyaa ta'uun kakuu raawwatan
Goodayyaa suuraa Vilaadmiir Putiin erga marsaa afraffaa filamanii booda haasaa yeroo taasisanitti
Vilaadmiir Putiin marsaa afraffaaf pirezedaantii Raashiyaa ta'uuf kakuu erga rwwatanii booda haasawaa taasisanniin dandeetii biyyatiin qabdu hoiitti jijjiiruun "milkaa'ina addaa fida," jedhan.
Keessumoonni 5,000 ta'an sirna kakuu isaanii galma Kireemliinitti qophaa'e hedduu hawwataa ture kanarratti argamaniiru.
Viladimiir Putiin erga filannoo Ebla darbe kana mo'atanii booda Wixata arr'aa marsaa 4ffaa Pirezedaantii Raashiyaa ta'uun kakuu raawwachuuf.
Takkaa akka pirezedaantiitti yeroo biraa ammoo akka ministira muummee ta'uun waluumaa galatti kanaan dura waggoota 18f aangoorra kan ture Putiin ammallee marsaa 4ffaa kakachuun pirezedaantii ta'uuf jedha. Mormitoonni isaa garuu bulchiinsa Putiin kana akka sirna bittaa mootii durii Raashiyaa kan bara 1917 dura turanii waliin walfakkeessu.
Sanbata darbe poolisoonni mormii bittineessan hiriira mormii bulchiinsa Putiinirratti Mooskoofi magaalota Raashiyaa biroo keessatti ka'an fuuldura dhaabbachaa turan.
Wixata arr'aa kana yeroo Putiin kakuu raawwatus Mooskootti jeequmsi jiraachuu mala sodaan jedhu jira.
Mormiiwwan sun maaliif turan?
Mormii Sanbata darbe tureen namoonni 1,000 ol ta'an guutummaa Raashiyaarraa magaalota 19 keessaa qabamaniiru. Walakkaa ol kan ta'an garuu Mooskoo keessaa qabaman.
Putiin filannoo ammaa kanaan %76 argachuun mo'atanillee, bakkawwan gara garaatti mormiifi bu'e ba'iin akka jiru tajjabdoonni filannoo idile-addunyaa ta'an gaabaasaa turan. Komeen ka'aa tures, filannoo ture hatameera kan jedhu ture.
Mormitoonni biyya keessa jiran Putiin sirna bulchiisa Putiin dimokiraasii balleessuuf kan hojjetu akka ta'e himatu. Akka mormitoota kanaatti, Putiin tooftaadhaan akka mormitoonni sagalee argatanii paarlaamaa seenuu hin dandeenye tooftaadhaan hojjeta jedhu.
Putiin yeroo jalqabaaf bara 2000 pirezedaantii ta'uun kan filaman. Bara 2004 turtii isaanii waggoota afurii sirreeffachuun bara 2008 ofii ministirra muummee ta'uun aangoo fakkeessuu Dmitry Medvedev kennanii ofii duubarraa bulchaa turan. Kana kan godhanis, akka seeraa biyya sanaatti marsaa lama qofa kan tajaajiluu danda'an.
Marsaa amma filame kanaan waggoota ja'aaf kan aangoorra tursiisu mirkaneeffataniiru.
Basaastuutu pirezedaantii ta'e
Goodayyaa suuraa Putiin yeroo bakka basaastummaa keessa itti hojjetanitti dhukaasuu shaakalan
Putiin, Onkoloolessa 7 bara 1952 dalatee erga seera baratee booda hojii icciitii poolisii (kan basaasuu) biyya sanaa KGB jedhamu keessatti basaastummaadhaan Komunistii Jarman bahaaf tajaajiluun eegale.
Bulchiinsa Putin jalati Raashiyaan hangam jijjiiramte?
Namoonni giddu galeeyyii ta'an bulchiinsaPutiiniin walqabatee tasgabbii uumamee ture simatanii turan .
Warreen Kaabaa Kaawukaash jiran faxxoquu barbaadan garuu bulchiinsa Boris Yeltsin kan Putiin dura ture danqaa itti ta'an. Dhumarrattis wal ajjeechaafi dhangala'uu dhiigaa cimaa fide.